Vanhu pachavo uye Bhizinesi Diki - Mamirioni Macheki
Vanhu vamwe navamwe uye Bhizinesi diki
Isu tiri mubatanidzwa wevashandi vepasi rese vanopa vanhu / vanhu / Mabhizinesi uye mhuri dzinoda kurairwa uye kubvunzana pane zvinhu zvakaita seEmpigration, Dzidzo, Bhizinesi kumisikidzwa, Basa reMabasa, Kuiswa Kwenyika Dzepasi Pese, Zvemitemo, Visa Rubatsiro, Vezvemari Zano, Zivakwa Real Estate. International Company Fform, International Bank Akavhurwa Kuvhurwa, Yakafanira Kubatira, Akaundi Outsourcing, Trademark Kunyoresa, Yakasarudzika HR Solutions, Virtual Hofisi, Kubvumidza kweVashandi, Investor Immigration Chirongwa, Kushanda Capital Solutions, Equipment Financing, Bhizinesi Valuation, Bhizinesi Bhizinesi, Kupedzerwa basa, IT Mhinduro. , Yakafanira Kushanda uye Kuenderana.
Isu tinogadzira mikana yeVanhu uye Makambani kuti vatore hupenyu hwakanaka kwavari.
Isu tichagara tichive mutevedzeri wako akavimbika wehurefu hwakareba.
Kubudikidza neruzivo rwedu hukuru, hunyanzvi uye mabasa mazhinji akapihwa nesangano redu nekambani, isu tanga tichibatsira nekufambisa varidzi vemabhizinesi, makambani uye vekugara, pamwe nemhuri dzavo kubatanidza kambani uye kutanga bhizinesi idzva, kuwedzera, kukura uye kuchengetedza mabhizinesi avo kana tichitsvaga basa, takagadzika kwazvo kuti tikutungamirire munzira yekubudirira.
Kunyangwe iwe uchifarira Merger uye Kuwana, kutama, kuda kudzosera kumashure mabasa ehurongwa nemafambisirwo, kuyedza kutsvaga capital kana kuronga mumwe wako kana kutsvaga kuchizvarwa chako chinotevera kuronga kuronga, kana kutsvaga real estate kuraira kana Immigration Services kana Dzidzo Abroad kana IT Services isu tinogona kukubatsira iwe mune ese masevhisi sezvataurwa.
Yedu yekugadzira mhinduro inosanganisira:
Affordable Kufambisa mazano uye kutsigirwa.
Tailor-yakagadzirwa kuronga uye zano.
Kutsanangura ma Timita ehurongwa hwese.
Maitiro ekugadzirwa kwekambani akaitwa nyore.
Bank account kuvhurwa
Ipa mufananidzo wakajeka wezvekuwedzera mari, hapana akavanzika akavhunduka.
Kubatsira Mukuvhura Akaundi yeBhangi iri iro runyengeri nyaya chero munyika nyowani.
Kubatanidza uye kuwana mikana.
Mikana yekubvisa-mutoro kumashure hofisi
IT Services, fanika, Webhusaiti kana Ecommerce Site
Isu tinoshanda newe kutsanangura chirongwa chinobatsira kuwedzera zvaunogona / mamiriro / kugona kwemari kuti uone zvinangwa zvako nezvido zvako. Pakupedzisira chinangwa chedu ndechekuona kuti tinopa mhando yebasa rinoshanda zvakanyanya kwauri, yako mhuri uye nesangano rako, isu tinowanikwa kuti tishande mumwe-mumwe, mumunhu uye nerunhare, skype, viber, whatsapp, izvo nzira yekutaurirana yakakunakira iwe.
Iyo nheyo yebasa redu inorarama mukugara uchiita izvo zviri mukati pezvakanakira vatengi vedu.
Isu tinozvirumbidza pamusoro pekucheka kuburikidza nekuoma, kuponesa mapato ese akakosha simba uye nguva.